AHOANA NY HANDEFASANA KARATRA VKONTAKTE - VKONTAKTE - 2019
Ahoana ny handefasana karatra VKontakte
Ny mampiavaka ny Skype dia ny fahafahana mampiseho izay mitranga eo amin'ny efijery amin'ny ordinateranao, ho an'ny mpiara-miasa aminao. Azo ampiasaina amin'ny tanjona maromaro izany - ny famahana olana amin'ny ordinatera, mampiseho zavatra mahaliana izay tsy hita mivantana, sns. Mba hianarana ny fomba hizarana fanehoan-tsary amin'ny Skype - vakio.
Mba hahafahan'ny fampisehoana screen amin'ny Skype ho mendri-kajika sy tsara kalitao, dia tsara ny manana aterineto miaraka amin'ny tahan'ny fampitaovana 10-15 Mbit / s ary mihoatra. Tokony hifanaraka koa ny fifandraisanao.
Zava-dehibe izany: Ao amin'ny dikan-teny ofisialin'ny Skype (8 sy ambony), navoakan'i Microsoft, dia navaozina tanteraka ny interface interface, ary niova na nanjavona mihitsy aza ny fitaovana sy ny fitaovana fanorenana. Ny singa eto ambany dia hozaraina roa: ny voalohany dia hifanaraka amin'ny dikan-teny misy ankehitriny, ny faharoa amin'ny alohany, izay mbola ampiasaina amin'ny mpampiasa maromaro.
Demôgrafika amin'ny Skype version 8 sy ambony
Ao amin'ny Skype vaovao, nanjavona ny tontonana ambony miaraka amin'ny rohy sy menus, miaraka amin'ny fanampian'ireo singa ireo azonao ampiasaina ny programa ary afaka miditra amin'ireo asa fototra. Ankehitriny, ny zavatra rehetra dia "miparitaka" any amin'ny faritra samihafa amin'ny varavarankely.
Raha izany, mba hampisehoana ny efijery amin'ny antoko hafa, araho ireto dingana ireto:
Antsoy ny mpampiasa azy amin'ny alàlan'ny horonam-peo na horonan-tsary, ahitàna ny anarany ao amin'ny boky adiresy, ary tsindrio ny iray amin'ireo bokotra anankiroa ao amin'ny zoro havanana amin'ny rindrin'ny varavarankely.
Miandrasa mandra-paha-valiny ilay antso.
Alohan'ny hanomanana ny votoatin'ny fampisehoana dia kitiho ny bokotra ankavia (LMC) eo amin'ny sehatra amin'ny endrika efamira roa.
Hahita varavarankely iray izay ahafahanao misafidy ny fampisehoana aseho (raha mihoatra ny iray no mifandray amin'ny solosaina) ary hizara ny fampielezam-peo avy amin'ny solosaina. Rehefa avy nanapa-kevitra ny paikady dia tsindrio ny bokotra. "Fihetsiketsehana efijery".
Ny mpiara-mitory aminao dia hahita ny zavatra rehetra ataonao eo amin'ny solosainao, mandrenesa ny feonao ary, raha nampihetsika ny feon'ny fampielezam-peo, ny zava-drehetra izay mitranga ao anatin'ny rafi-piasana. Noho izany dia hijery ny lahatsorany izy:
Ary noho izany - amin'ny anao:
Mampalahelo fa tsy azo ovaina ny haben'ny faritra misy ny sarimihetsika miloko mena. Amin'ny tranga sasany dia mety tena ilaina io fahafaha-manao io.
Rehefa vita ny fanehoanao ny efijery dia tsindrio indray ilay kisary indray amin'ny endrika kilaometatra kely anankiroa ary mifidiana avy ao amin'ny menio fanala "Atsaharo ny fampisehoana".
Fanamarihana: Raha mihoatra ny iray monja dia mifandray amin'ny ordinatera na ny solosaina findainao, dia azonao atao ny mifampidipiditra ao anatin'io sakafo io. Mba hampisehoana ny mpandinika roa na maromaro amin'ny fotoana iray dia tsy azo atao mihitsy.
Aorian'ny famaranana ny fihetsiketsehana dia afaka manohy feo na lahatsary amin'ny olon-kafa ianao, na mamarana izany amin'ny fanindriana ny bokotra resetana amin'ny iray amin'ireo varavarankely Skype.
Araka ny hitanao, tsy misy sarotra ny mampiseho ny mombamomba anao amin'ny mpampiasa rehetra ao amin'ny bokinao amin'ny Skype. Raha mampiasa ny dikan-teny fampiharana eto ambany ny faha-8 ianao dia vakio ny ampahany manaraka amin'ilay lahatsoratra. Fanampin'izany, dia manamarika fa mitovy amin'ny mpampiasa marobe (ohatra, mba hanaovana ny fampisehoana) ny efijery. Ny mpanelanelana dia azo antsoina mialoha na efa ao anatin'ny dingan'ny fifandraisana, izay misy bokotra samihafa omena ao amin'ny varavarankelin'ny fifanakalozan-kevitra.
Skripta amin'ny Skype 7 ary ambany
Raiso ny programa.
Miantso ny mpiray tampo aminao.
Sokafy ny menu vaovao. Ny bokotra misokatra dia marika fanampiny.
Mifidiana zavatra iray hanombohana ny demo.
Ankehitriny dia mila manapa-kevitra ianao hoe tianao ve ny mandefa ny efijery manontolo (Desktop) na ny varavarankelin'ny programa manokana na ny mpikaroka. Ny famaranana dia natao amin'ny fampiasana ny lisitra fidirana eo an-tampon'ny varavarankely izay miseho.
Aorian'ny fanapahan-kevitrao amin'ny faritra fampielezana, tsindrio "Atombohy". Hanomboka ny fampielezana.
Ny faritra am-pandehanana dia asehon'ny mena iray mena. Afaka miova isaky ny fotoana voafetra ny fampielezam-peo. Tsindrio fotsiny amin'ny marika plus, toy ny teo aloha, ary mifidiana "Hanova ny fikolokolo fizarana sary".
Ny fampielezana dia afaka mijery olona marobe. Mba hanaovana izany, mila manangona fihaonambe ianao amin'ny fanipazana ny fifandraisana ilaina amin'ny resaka amin'ny alalan'ny totozy.
Mba hampitsaharana ny fampielezam-peo, tsindrio ny bokotra iray ary mifidiana mba hampitsaharana ny fampisehoana.
Ankehitriny dia fantatrao ny fomba hampitana ny efijery amin'ny mpanelanelana anao amin'ny Skype, na inona na inona fandaharana fandaharana natsangana ao amin'ny solosainao.
https://termotools.com mg.termotools.com © VKontakte 2019